गैराखोला भलिवल खेल अपडेटः आजका खेलहरूमा बिजय टीमहरू को को हुन? जान्नुहाेस् – KhabarTime
पार्टी एकता कायम भएपछि वामदेव खुशी हुदै दिए यस्तो सन्देश…
प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका शेरबहादुर माथि जितु नेपालले यस्तो के गरे? हेर्नुस् भिडियो!
कविताः ढुङ्गा – रामकृष्ण काफ्ले !
गण्डकी प्रदेशमा फेरि यसरी बने पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्री
बिहे हुदै गरेको बेहुलाको यस्तो हालत देखेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
बि.स.२०७८ साल बैशाख ३० गते बिहिबार, हेर्नुहाेस् तपाईंहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल !
बि.स.२०७८ साल बैशाख २९ गते बुधबार, हेर्नुहाेस् तपाइँकाे राशि अनुसारकाे भाग्यफल !
बि.स.२०७८ साल बैशाख २८ गते मंगलबार, हेर्नुहाेस् तपाइँहरूकाे राशि अनुसारको भाग्यफल!
संसदले दिएन विश्वासको मत, प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त, कस्ले पक्षमा कस्ले बिपक्षमा मत हाले हेर्नुहोस
गैराखोला भलिवल खेल अपडेटः आजका खेलहरूमा बिजय टीमहरू को को हुन? जान्नुहाेस्
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हरिनास ०६ गैराखोलामा सञ्चालित भलिबल प्रतियोगितामा आज भएका खेलहरूमा विभिन्न समूहहरूमा बिजय हुने टीमहरू यी हुन् ।
आजको खेलमा पहिलो खेल सालडाँडा र अग्रिडाँडाको बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खेलमा सालडाँडाले २ सेट नै खेल जितेर बिजय हुन सफल भएको छ । खेल २५ – १९ र २५ – ११ को सोझाे सेटमा सालडाँडाले जितेको थियो ।
अर्को खेल क्याक्मी कै धेँगाछाप र चाङ्सिङ टीम बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त् खेलमा चाङ्सिङ टीमले बिजय हात पार्न सफल भएका छन् । खेलमा एक सेट धेँगाछापले जितेको थियो भने लगातार २ सेट जितेर चाङ्सिङ टिम बिजय भएको थियो । आजको खेलमा १३ – २५, २५ – १३ र २५ – १८ अङ्क तालिका सहित चाङ्सिङले बिजय हात पारेको थियो ।
आजै भएको पुर्कोट र गैराखोला टीम बीच भएको प्रतिस्पर्धामा गैराखोला टीम बिजय भएको थियो । उक्त खेलमा लगातार २ खेल नै गैराखोलाले जीत हात पर्न सफल भएको थियो । सो खेलामा २५ – १५ र २५ – १९ अङ्क तालिका सहित २ खेलमै गैराखोलाले जीत हासिल गर्न सफल भएका थियो ।
आज नै भएको धुर्कोट र खानीखोला टीम बीच भएको प्रतिस्पर्धामा धुर्कोट टीमले बिजय हासिल गर्न सफल भएको छ । उक्त खेलमा भएको ३ सेट खेलमा २ सेट धुर्कोटले जितेर बिजय हात पार्न सफल भएको थियो । उक्त खेलमा २५ – १३, २३ – २५ र २५ – १६ सहित धुर्कोट टीम बिजय भएको हाे ।
त्यस्तै आजै भएको काम्ती रर बडरभञ्ज्याङ् बीच भएको खेलमा बडरभञ्ज्याङ समूहले बिजय हात पारेका छन् । २ खेलको सोझो सेटमा जित हासिल पार्न बडरभञ्ज्याङ र काम्ति बीचको २ सेटमा २५ – २१ र २५ – १५ को सोझो सेेटमा बडरभञ्ज्याङ समूहले जितेका थिए ।
यस्तै आजै भएको हिलेमर्याङ र सालडाँडा बीच भएको खेलमा सालडाँडा टीम बिजय भएका छन् । खेलको सोझो २ सेट नै जितेर सालडाँडा बिजय भएको थियो । यस खेलमा २४ – १८ र २५ – २३ अङ्क सहित सालडाँडा बिजय भएका थिए ।
अर्को लामडाँडा र धुर्कोट टीमहरू बिज भएको खेलको प्रतिस्पर्धामा लामडाँडा टीमले सोझो २ सेट नै जितेर बिजय भएका छन् । उक्त खेलमा २५ – २२, २५ – २१ को सोझो सेटमा लामडाँडा बिजय भएका थिए ।
त्यस्तै आजको अन्तिम खेलमा आयोजक गैराखोला र चाङसिङ बीच भएको खेलको ३ सेत मध्ये २ सेट आयोजक गैराखोलाले जित हात पार्न सफल भएको छ । उक्त खेलमा २५ – १५, २१ – २५ र २५ – १४ अङ्क सहित आयोजक टीम बिजयी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा माग भएसँगै यस्तो चिन्ता!
ओलीसंग मिल्न माधव नेपालले ल्याए नयाँ यस्तो प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक
छायांकनमा वेब सीरीज ‘प्याकुली’